Caalamka, 06 January 2020
Isniin 6 January 2020
Tehran: Boqolaal kun oo u baroordiiqay Solemani
Hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta hoggaamiyey salaadda janaasada ee Qassem Soleimani, ayada oo boqolaal kun oo qof ay isugu soo baxeen magaalada Tehran, si ay ugu baroordiiqaan Jeneraalkii sare ee Iran.
Ciraaq: Baarlamaanka oo Amray in la Saaro Ciidamada Shisheeye
Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa ansixiyey qaraar ku baaqaya in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan Ciraaq, xilli ay sii xoogeysaneyso xiisadda ka dhalatay dilkii uu Mareykanku todobaadkii hore gudaha Ciraaq
Meydka Qaasimi oo la Geeyey Iran
Q. Soleimani oo loo Baroor-diiqayo
General Qassem Soleimani, taliyihii cidiamada ilaalada kacaanka Iran ee Maraykanku uu ku dilay dalka Ciraaq ayaa maanta baroor diiq loogu sameeyey gudaha dalka Ciraaq, iyadoo Ra'iisal Wasaaraha Ciraaq uu ka qeyb galay munaasabadda.
Maxaa ka dhalan kara dilka Jeneral Qassem Soleimani?
Dowladda Mareykanka ayaa fulisay weerar dhaawac xooggan gaarsiiyey Iran, ayada hoggaamiyihii ciidamada xulka ah ee Qudus ee dalkaas ku dushay duqeyn ka dhacday dalka Iraq.
Iran iyo Xisbullah oo ku hanjabay aargudasho
Iran ayaa ku hanjabtay “aargudasho darran”, waxaana ay sheegtay in Mareykanka uu qaadi doono mas’uuliyadda cawaaqibka ka dhasha dilka mid ka mid ahaa taliyayaasheedii sare, Jeneral Qasem Soleimani.
Mareykanka oo duqeyn ku dilay Jeneral sare oo Iranian ah
Baarlamanka Turkiga oo ansixiyey in ciidamo la geeyo Libya
Baarlamanka Turkiga ayaa maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in xukuumadda ay ciidamo gayso dalka Libya, si ay u taageeraan dowladda QM ay taageerto ee Tripoli.
Dibad-baxayaashii oo isaga tagay safaaradda Mareykanka ee Iraq
Taageerayaasha maleeshiyada Iran ay taageerto ee dalka Iraq, kuwaas oo ku xoomay safaaradda Mareykanka ee Baghdad, ayaa isaga tagay Arbacadii kadib markii Washington ay ciidamo dheeraad ah gaysay halkaas, kuna hanjabtay aargudasho ka dhan ah Tehran.
Dibad-baxayaal weli isku dayaya inay galaan safaaradda Mareykanka ee Iraq
Ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baghdad ayaa maanta u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa inay kala eryaan dibad-baxayaal Iran taageersan oo xalay oo dhan ku sugnaa irdaha safaaradda.
Barnaamij gaar ah: Dhacdooyinkii caalamka ee 2019
Barnaamijka oo ah mid gaar ah waxaan idinkugu soo gudbinaynaa dhacdooyinka ka dhacay caalamka sannadkan 2019-ka kuwoodii ugu waaweynaa. Waxaa soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dibad-baxayaal carreysan oo ku xoomay safaaradda Mareykanka ee Iraq
Dhowr kun oo dibad-baxayaal ah ayaa maanta isugu soo baxay banaanka safaaradda Mareykanka ee Baghdad, si ay u cambaareeyeen duqeymo ay ciidamada Mareykanka la beegsadeen maleeshiyo Iran ay taageerto oo ku sugan dalalka Iraq iyo Syria.